Dhamaan shaqooyinka keydka keydka Google | Androidsis
La Keydso Feylka markaad isticmaasho ma sii noolaan kartid la'aantiis waana tan ku dhacda midii ay faylasha Google faylasha soo saareen maalmo ka hor. Xaqiiqdii waxaan kuu sharraxeynaa sida loo isticmaalo iyo sida loo awoodi karo inaad horey ugu haysato dalabkaaga, maaddaama nooca hadda ku yaal Play Store uusan lahayn.
Fayl Amni ah in on Samsung-dhamaadka sare Samsung Galaxy waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican amniga Knox iyo qalabka kale waxaan sidoo kale maskaxda ku haynaa sida ay ugu dhacdo mobilada Huawei. Haatan Google waxay ku socotaa bandwagon si ay ula wadaagaan waayo-aragnimadaas oo markaa waxay leedahay dukumiintiyo gaar ah ama xasaasi ah, sawirro ama fiidiyowyo halkaas. U tag.
1 Sida loo helo Faylasha Google Fayl Ammaan ah
2 Sida loo isticmaalo Faylka Faylka ah ee Google
3 Sida loo dhaqaajiyo ama looga saaro "faylasha" faylka "Secure Folder"
Sida loo helo Faylasha Google Fayl Ammaan ah
Haddii aan u cusbooneysiino nooca ugu dambeeya ee Faylasha Google ma heli doono sheeko cusub oo codsi ah oo lagu garto Moobilkeena aad u nadiifi. Xaqiiqdii, waa inaan tagnaa bakhaar ku yaal APKs si aan u soo dejino nooca ugu dambeeya ee horeyba ula imaaday Faylka Sugan.
Waa kan nooca 1.0.325551336 oo aan u adeegsanayno inuu ina baro sida loo isticmaalo Faylasha Faylasha ee Google iyo waxaad ku samayn karto:
Download: Faylasha Google 1.0.325551336 APK
Faydh Ammaan ah oo muhiim ah oo ku jira Galaxy-ka sida Xusuusta 10 + oo aan horeba uga samaynay qaar qaas ka duwan mid kale oo aan ku siiyo ogow dhammaan waxa ku jira iyo wixii ka baxa. Iskusoo wada duuboo kaliya maahan awoodo inaad qariso sawiro, dukumiinti ama feylal, laakiin maxaa yeelay waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku rakibto codsiyo. Taasi waa, waxaan ku yeelan karnaa koonto Instagram isla casharka isla koontadaada Google. Waxay u egtahay inaad mid uun ku haysato mid kale.
Oo halkan Waxyaabaha lagu beddelo Google, maxaa yeelay xilligan nooca ugu horeeya ee Google's Secure Files Folder wuxuu la yimaadaa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inuu awoodo inuu qariyo dukumenti ama feyl kasta oo aan dooneyno, laakiin aan ka badneyn
Mar haddii la cusbooneysiiyo cusbooneysiinta Google Files APK, waxaan aadeynaa tabta "Explore" oo ku taal xagga hoose. Halkan waxaan ka heli dhammaan qaybaha faylalka waxay istaagaan xagga hoose hel badhanka u heellan Feylka Sugan waana la arki karaa daqiiqadda ugu horreysa.
Haddii aan gujino Folder-ka Sugan waxaan aadeynaa shaashad aan ku sameysano lambar 4-lambar ah taasina waxay naga caawin doontaa inaan soo bandhigno ama "ka saarno" faylasha aan ka dooneyno keydka Amniga. Taasi waa, waxaan ku xirnaa PIN-ka kaas oo noo oggolaan doona inaan wax walba oo aan dooneyno ku helno meel ammaan ah.
Marka PIN la sameeyo, waxaan si toos ah ugu tagi doonnaa Feylka Sekuriska ah si aan u aragno inaynaan waxba ku haysan. Daaqaddaan kuma dari karno faylasha gacanta, taas oo ka duwan Samsung Secure Folder kaas oo aad ku dari karto feylal ama codsiyo dhammaan raaxada adduunka.
Sida loo dhaqaajiyo ama looga saaro "faylasha" faylka "Secure Folder"
Jidka aan ku qasban nahay kudar faylalka keydka keydka ee Google Waa iyada oo loo marayo barnaamijka biraawsarka. Taasi waa, waxaan ka tagnay keydka Amniga oo waxaan baari doonnaa galka Soo degsashada si aan u sameyno saxaafad dheer kana soo saarno menu-ka la soo saaray adoo gujinaya astaanta oo leh seddex dhibcood oo toosan, waxaan ka heli karnaa ikhtiyaarka "U Dhaqaaji Faylka Sugan ".
La xushay, ka faylka wuxuu aadi doonaa Faylka Sugan si uu noo tilmaami karo iyada marka aad gelayso PIN-ka mar kale; halkan waxaan ku hilmaami karnaa xilligan ikhtiyaarkaas nooca Samsung ah oo noo oggolaanaya inaan galno Feylka Sugan illaa iyo inta aanan xirmin taleefanka. Waxaan rajeyneynaa in Google ay awood u leedahay inay horumariso astaamaheeda.
para ka saar faylasha keydka 'Secure Folder' waxaan raaci doonaa isla habkaas laakiin faylka ku jira. Oo markaa waxaan u isticmaali karnaa Sirta Faylka ah ee Faylasha Google taasna way ku habboon tahay inay ku ilaaliso dukumiintiyada si wanaagsan loo ilaaliyo. Hadda, haddii aad rabto inaad u gudubto heer kale, maxaa yeelay taleefanka soo socda waxaad horayba u ogtahay nooca ay tahay inuu noqdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo isticmaalo Faylka Faylka ah ee Google
[Fiidiyow] Sida loo adeegsado qaabka ALLAH Calculator ALLAH